Avast प्रिमियर सफाइ सक्रिय कोड 2017-2018 दरार किजेन
घर » एन्टिभाइरस & सुरक्षा » Avast सफाइ सक्रिय कोड 2018
Avast सफाइ सक्रिय कोड 2018
द्वारा Anastasiya तुला | जनवरी 21, 2018
Avast सफाइ मुक्त सक्रियता कोड 2018, PC Optimizer crack isamarvelous software which is used to clean junk files from the devices. यसलाई उन्नत प्रविधि छ, जो स्क्रापहरू र मालवेयर को सबै प्रकार सफा गर्न मद्दत गर्छ. यो एक सशक्त सफ्टवेयर हो र अनावश्यक सामान देखि एक उपकरण हटाउन सबै आवश्यकताहरू पूरा.
डाउनलोड Avast सफाइ सक्रिय कोड फ्री
Avast सफाइ सक्रिय कोड यो रूपमा प्रभावकारी क्लीनर स्पाइवेयर देखि आफ्नो उपकरण बचाउँछ. यसबाहेक, नयाँ संस्करण समावेश स्क्यानिङ प्रविधि आफ्नो मल्टिमिडिया स्कैन जो पनि फाइलहरू. यो पत्ता भइरहनेछ मालवेयर, मनमनै मल्टिमिडिया डाटा, र पत्ता लगाउने पछि, तपाईँको यन्त्र बाहिर सबै त्रुटिहरू हत्या.
अनुकूलन समारोह प्रयोगकर्ता समय आफ्नो यन्त्रहरू समय जाँच गर्न अनुमति दिन्छ. यसरी, उपकरणहरू सबै समय सुरक्षित रहन, र प्रयोगकर्ता तनाव मुक्त महसुस. Avast, को सफाइ सफ्टवेयर पनि बढ्छ उपकरणहरू को ब्याट्री समय. यो अनावश्यक आवेदन पृष्ठभूमिमा चलिरहेको र ब्याट्री खपत जुन बंद. सर्वश्रेष्ठ कुराहरू बारे Avast सफाइ सक्रिय कोड. सबै avast सक्रियता कोड पनि तपाईंलाई आफ्नो डाटा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ जो भण्डारण क्लाउड प्रदान गर्दछ होइन.
Avast सफाइ दरार सफ्टवेयर पनि सबै खराब विस्तार व्यवस्था हटाउन सक्नुहुन्छ. यो पनि अपहरित खोजको मर्मत गर्न सक्छन्. Avast, सफा गर्नु, सफ्टवेयर धेरै भाषामा उपलब्ध छ, र Avast सफाइ सक्रिय कोड हस्तक्षेप धेरै अनुकूल छ. प्रयोगकर्ता चाँडै यसलाई सक्रिय र आफ्नो उपकरणहरू सफा गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउन को avast प्रिमियर सक्रियता कोड.
Avast सक्रियता पनि कोड एन्ड्रोइड लागि उपलब्ध, एन्ड्रोइड प्रणाली लागि आवेदन पनि उपलब्ध छ. एन्ड्रोइड मोबाइल मा, यो पनि काम गर्दछ नै तरिका र जंक फाइलहरू सफा. पनि ब्याट्री समय सुधार र धम्की र मालवेयर तपाईंको एन्ड्रोइड सुरक्षित बनाउन. तपाईं पनि नवीनतम प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ Malwarebytes विरोधी-मालवेयर 3.3.1.2183 प्रिमियम फुट्नु.
Avast सफाइ सफ्टवेयर उदेकलाग्दा विशेषताहरु पछि छ
यो डेटा क्षति र कम्प्युटर को गति वा तपाईँको Android प्रणाली असर गर्न सक्छ कि सबै क्षतिग्रस्त फाइलहरू सफा.
Avast सफाइ सक्रिय सफ्टवेयर दुवै मोबाइल र पीसी लागि डाउनलोड गर्न सकिन्छ.
यो ब्राउजर बाट सबै अनावश्यक डाटा मेटाउँछ.
ठूलो अद्यावधिक मुद्दा पत्ता लगाउने प्रणाली जो भाइरस पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, बग सूत्रहरू, आदि.
एक अनुकूलन सुविधा र पनि मल्टिमिडिया फाइलहरू स्क्यान गर्न सक्छन्.
यसलाई कुनै पनि जोखिम बिना क्यास डाटा सफा गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईंको Android र पीसी लागि परम धुन-अप.
स्वचालित रूपमा सबै भन्दा राम्रो गति लागि आफ्नो हार्डवेयर सेटिङ समायोजन.
तपाईं स्क्यान र धुन-अप तालिका.
एक समय सक्रियता – सक्रियता कोड प्रदान संस्करण उपयुक्त.
तपाईंको विन्डो रजिस्ट्री फाइलहरू सर्वश्रेष्ठ गार्ड.
अनावश्यक फाइलहरू हटाउने द्वारा एन्ड्रोइड गति बढाउने.
Avast प्रिमियर सक्रियता कोड उपलब्ध.
कसरी प्रयोग गर्ने & विकसित Avast सक्रिय कोड दरार
पहिलो, एउटा सक्रियता कोड संग Avast सफा-सफ्टवेयर डाउनलोड.
चालु र यसको सेटअप स्थापना.
फाइल Avastcleanup.txt थप निर्देशन लागि पढ्नुहोस्.
मार्गदर्शन सक्रियता लागि Avast सक्रियता कुञ्जी प्रयोग.
को सक्रियता प्रक्रिया लगभग एक मिनेट हुनेछ.
यसको हस्तक्षेप चलाउन सक्रियता सन्देश अप पप जब.
को avast प्रिमियर सक्रियता कोड Avast सफा-आनन्द.
नोट: यो भिडियो तपाईं उपकरण सक्रिय मा मदत गर्नेछ. तर बारेमा प्रिमियर सक्रिय कोड चिन्ता छैन. तपाईं एक विशाल EXE संग कुञ्जी डाउनलोड गर्न सक्छन्. तर यो साचो मात्र प्रदान टूट EXE काम गर्नेछ सम्झना.
डाउनलोड Avast सफाइ सक्रिय कोड 2018
← Anytrans 6.3.0 टूट कारण 10 फुट्नु ( म्याक + विन्डोज ) →
मरेको पल	डिसेम्बर 26, 2016